एजेन्सी : भारतमा एक किशोरले गरेको बहादुरीको अहिले विश्वभर चर्चा भइरहेको छ । घ’टना केही अघिको भएपनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा सो घ’टना र तस्बिर भाइरल भएको छ ।
भारतको सोनितपुर जिल्लाको मिस्सामारी गाउँमा एक ११ वर्षीय बालकले देखाएको बहादुरीले विश्वभर चर्चा पाएको हो ।उत्तम ताटि नाम भएका यी बालकले नदीमा डुबेका आमा र उनकी छोरीहरु बहादुरी पुर्वक बचाएका छन् ।
यो घटना ७ जुलाईको भए पनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि भाइरल भइरहेको छ । जिल्ला कलेक्टर लाख्या ज्योतिले सो घ’टनाको पु’ष्टि गरेकी छन् । उनले भनिन् हामीले डिप्टी कमिश्नरसँग कुरा गरेका छौं ।
उत्तमलाई राष्ट्रीय स्तरमा बहादुरी पुरस्कार दिनको लागि योग्य मानियोस् ।’ कलेक्टर लाख्याका अनुसार गएको ७ जुलाईमा एक महिला आफ्ना दुई सन्तानसँगै नदी पार गर्ने क्रममा थिइन् । जबजब उनी बच्चा लिएर नदिको बीच तिर गईन तब पानीको बहाब पनि बढ्दै गयो ।
महिलाले आफुलाई र बच्चाहरुलाई सम्हाल्न सकिनन् । त्यही बेला आफ्नो परवाह नगरी यी बालकले नदीमा हाम फालेर आमा र सन्तान सबैको ज्यान बचाउन सफल भएका थिए । यो घ’टना भारत आसाम राज्यको हो ।
तरकारी खादाँ नुन चर्को खाने बानी छ ? ज्यादा नुन चर्को खानाले बढ्नसक्छ यस्तो समस्या…हेर्नुहोस् ।
हा’म्रो श’रीरका लागि नुन अ’त्यावश्यक खाद्यपदार्थ हो । यसले शरीरमा सो’डियमको मात्रा कायम राख्छ । मां’सपेशी, तन्त्रिका, तरल पदार्थ आदिलाई सन्तुलनमा राख्न पनि नु’नमा पाइने तत्वले विशेष भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । तर, अत्यधिक नुन खाएमा त्यसले शरीरमा नकारात्मक अ’सर पार्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।
-नुनको बढी सेवनले मस्तिष्क, धमनी र मुटुमा बढी असर गर्छ । शरीरका रसायनमा असन्तुलन आई मानिसको मृत्युसमेत हुन सक्छ । -विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार एउटा व्यक्तिले प्रत्येक दिन ५ ग्रामभन्दा बढी नुन सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ ।
तर, दक्षिण अफ्रिकीहरू एक दिनमा ८ दशमलव ५ ग्राम नुन खाने गर्छन् । जुन पक्षाघात (स्ट्रोक) र हृदयाघातको कारण बनिरहेको छ । -वयस्क मानिसमा आवश्यकभन्दा बढी सोडियम हृ’दयरोगको कारक बन्ने गर्छ । -खानेकुरामा प्रयोग गरिने सोडियमको अत्यधिक मात्राले उच्च र’क्तचाप निम्त्याउँछ ।
बुढेसकालमा सोच्ने शक्तिमा समेत ह्रास ल्याउँछ । -शरीरमा सोडियमको मात्रा बढी हुँदा घुँडा र हातखुट्टा सुन्निने समस्या देखा पर्छ । -खानेकुरामा नुनको प्रयोग गर्दा त्यो स्वादिष्ट अवश्य हुन्छ । तर, कतिपय खानेकुरा छन्, जसमा नुनको मात्रा मिल्दैन । यस्तो हुँदा त्यसले झनै बढी अस’र गर्ने गर्दछ ।
Previous पूर्वमाओवादीको चेतावनी- लहरो तान्दा पहरो खस्ला !
Next श्रीमान सँगको डिभोर्ष पछि बनिन करोड़पति, हेर्नुहोस ।(भिडियो सहित)